UMartin Short, uSteve Martin noSelena Gomez Babuyela Esikhathini sesi-2 'Sokubulala Kuphela Esakhiweni' - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa UMartin Short, uSteve Martin noSelena Gomez Babuyela emuva kuSizini 2 'Yababulali Bodwa Esakhiweni'
UMartin Short, uSteve Martin noSelena Gomez Babuyela emuva kuSizini 2 'Yababulali Bodwa Esakhiweni'
Lo Mbukiso Wawungumlingo Omsulwa
by UTrey Hilburn III September 14, 2021
by UTrey Hilburn III September 14, 2021 298 ukubukwa
Jabulani, nonke! Isipho sangempela sombukiso, Ababulali kuphela esakhiweni uthola isizini yesibili kulandela isizini yokuqala ephumelele kakhulu.
Yonke uchungechunge lwemilingo ye-Hulu ifake ukubuya kukaSteve Martin noMartin Short benza abakwenza kangcono kakhulu. Isiqephu ngasinye naphakade besigcwele intelezi ephelele futhi leso siginesha yamahlaya engabazeki laba abaziwa ngayo.
“Kube nokuthile mayelana nale phrojekthi obekuzwakala sengathi kucishe kwafiphala kwasekuqaleni; kusukela ekudleni kwasemini kokuqala kukaDan noSteve lapho uSteve kwenzeka khona ukuthi wayenombono ngochungechunge, kuJohn egxumela emkhunjini ukuyakha, ukuvuma kukaSteve ukwenza inkanyezi kodwa kuphela uma uMarty emjoyina, ekwengezeni okuphefumulelwe kukaSelena. Amahlaya alethwa yileli thimba kube wukukhathazeka kwazo zonke iziphathimandla kulesi situdiyo, futhi abangane bethu baseHulu bakuthathe njengobucwebecwecwe obuyibo. Futhi manje, ngenxa yempendulo eyisimanga yezithameli, sijabule kakhulu ukusho ukuthi kuzoba nokubulawa okuningi esakhiweni - okuyizindaba ezimnandi kuwo wonke umuntu, ngaphandle kwalabo abahlala e-Arconia, ”kusho uKarey Burke, umongameli, 20.th Kusho iThelevishini.
Amazwibela we Ababulali kuphela esakhiweni kuhamba kanjena:
"Ababulali kuphela esakhiweni" balandela abantu abathathu abangabazi (uSteve Martin, uMartin Short noSelena Gomez) ababelana ngokuzibandakanya nobugebengu beqiniso futhi ngokuzumayo bazithola besongwe koyedwa. Uma kwenzeka ukufa kabuhlungu ngaphakathi eflethini labo elikhethekile e-Upper West Side, laba abathathu basola ukubulala futhi basebenzise ulwazi abanalo ngobugebengu beqiniso ukuphenya iqiniso. Njengoba beqopha i-podcast yabo ukubhala leli cala, laba abathathu badalula izimfihlo eziyinkimbinkimbi zesakhiwo esisukela eminyakeni edlule. Mhlawumbe kuqhuma ngisho nangokwengeziwe amanga abatshelana wona. Ngokushesha, iqembu labathathu elisengcupheni yokuthola ukuthi umbulali kungenzeka ukuthi uhlala phakathi kwabo njengoba bejaha ukucacisa izinkomba eziqhubekayo ngaphambi kwesikhathi.
Uma uphuthelwe wuhlelo, manje isikhathi sokubuka nokulungiselela isizini 2. Ngeke uzisole ikakhulukazi uma ungumlandeli omkhulu kaMartin noShort.
Isikhathi sonyaka esisodwa Ababulali kuphela esakhiweni njengamanje isakazwa kuHulu.